လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း “Marine” | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
September 9, 2009 — mmweather
တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၂ဝဝ ခန့်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ကြောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင် မိုးလေဝသဌာနမှ MARINE ဟု အမည်ပေးထားကြောင်း၊ ILOCOS SUR, LA UNION, ZAMBALES, BATAAN, WESTERN PANGASINAN AND LUBANG ISLAND. ဒေသများအတွက် သတိပေးချက် Signal#1 ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ယခု လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း MARINE အားဆက်လက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလျှက်ရှိပြီး ထူးခြားမှုအခြေအနေကို http://sites.google.com/site/mmweathernow/ နှင့် http://mmweather.ning.com/ တို့တွင်လည်း update လုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted in Weather News. Tags: weather. LeaveaComment »
« ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့် ဂျပန်စူပါမုန်တိုင်းကြီးများ
Good weather now better for H1N1 virus to spread, warn experts »